(အ) အက္ခရာ မော်တော်ယာဉ်များ ကျပ်သိန်း ၁၁၀ ရောက်ရှိ
ပို့စ်တင်ချိန် - 10/28/2013 02:40:00 PM
ယာဉ်အိုယာဉ်ဟောင်းများ ဖျက်သိမ်း၍ အစားထိုး တင်သွင်းခြင်း စီမံချက်အရ အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ အပ်နှံခွင့်ပြုထားသော ‘အ’ အက္ခရာ မော်တော်ယာဉ်များမှာ ကျပ်သိန်း ၁၁၀ ဝန်းကျင်တွင် အရောင်းအဝယ် ဖြစ်နေကြောင်း ဟံသာဝတီ အခြေစိုက် ယာဉ် ဝယ်ရောင်း အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူများထံမှ သိရသည်။
“ ‘အ’ အက္ခရာယာဉ်တွေ လွန်ခဲ့တဲ့လက ၉၀ ကျော်ဝန်းကျင် ရှိခဲ့ပြီးတော့ ကားလက်ခံတဲ့နေ့က ငါးသိန်း ဝန်းကျင်လောက် ချက်ချင်း ဈေးတက်သွားတယ်။ အခု လက်ရှိပေါက်ဈေး ၁၀၈ သိန်း ဝန်း ကျင်လောက် ရှိနေတယ်။ ဈေးမြှင့်နေတော့ အရောင်းအဝယ်အေးတယ်” ဟု အဆိုပါ ‘အ’ အက္ခရာယာဉ် ဈေးကွက် အခြေအနေကို လုပ်သက်ရင့် မော်တော်ယာဉ် ဝယ်ရောင်းတစ်ဦးဖြစ်သည့် ဦးလှမျိုးက သုံးသပ်သည်။
‘အ’ အက္ခရာယာဉ်များမှာ ၁၀၇ သိန်းခန့်ပေးကာ တစ်ပြိုင်နက် ၁၀ စီးခန့် ဝယ်လိုသူတစ်ဦးကို ယမန်နေ့က တွေ့ခဲ့ရသော်လည်း အရောင်းမရှိသဖြင့် အရောင်းအဝယ် အေးလျက်ရှိကြောင်း၊ ‘အ’ အက္ခရာ ယာဉ်များမှာ ယခင်ကတည်းက ကုမ္ပဏီများနှင့် ကြိုရောင်းမှုများ ရှိသဖြင့် လက်ရှိအချိန်တွင် လက်ကျန်နည်းကြောင်း ကားပွဲစား တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးသိန်းဖေက ၎င်း၏ အမြင်ကို ပြောကြားသည်။
‘အ’ အက္ခရာ မော်တော်ယာဉ်ဟောင်းများ အပ်နှံမှုကို ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးရှိ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနများတွင် အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ သွားရောက် အပ်နှံနိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ရထားပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
အထက်ပါ ယာဉ်အို ယာဉ်ဟောင်းများ ဖျက်သိမ်း၍ အစားထိုး တင်သွင်းခြင်း စီမံချက် စတင်ဆောင်ရွက်သည့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်နေ့အထိ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနသို့ ယာဉ်အိုယာဉ်ဟောင်းများ အပ်နှံမှု စုစုပေါင်း ၉၄,၁၆၈ စီး ရှိပြီ ဖြစ်ကြောင်း ရထားပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ စာရင်းအရ သိရှိရသည်။
ကားမောင်းခွင့်ပိတ်ပင်သဖြင့် ဆော်ဒီအမျိုးသမီးများ က...
နမ်လင်းပါ ဒုက္ခသည်စခန်း ရိက္ခာအရေးပေါ်လို
အငှားယာဉ်တစ်စီး အုတ်ခုံအားတိုက်မိ၍ ယာဉ်မောင်းပါ ခရ...
အပစ်ရပ်ပြီး နိုင်ငံရေး ဆက်လက် ဆွေးနွေးရန် KNU နှင့...
ပထမဆုံး Nude (ကိုယ်လုံးတီး) ပန်းချီကားနှင့် Paper ...
COPD နာတာရှည် အသက်ရှူလမ်းပိတ်ရောဂါ
Side Effects of Otrivin Nasal Spray (အိုထရီဗင်) နှ...
မန္တလေး အပါအဝင် မြို့ခြောက်မြို့တွင် ကွန်တိန်နာဆိပ်...
ပြင်ဦးလွင် ကျေးရွာ ၁၇ ရွာ လယ်သိမ်းခံ တောင်သူများ စ...
ဖုန်း Message ဖြင့် ငွေလွှဲနိုင်ရန် စီစဉ်
တပ်မတော်က သမ္မတ ဘက်ကလည်း မလိုက်ဘူး။ ဦးရွှေမန်း ဘက်ကလ...
JICA အဖွဲ့၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ဧရာဝတီနှင့် ချင်းတွင်ြး...
chatroom ကြောင့် ချွေးမနှင့် ချိန်းတွေ့မိခဲ့သည့် တ...
ဦးနှောက် ကျန်းမာရေးကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်မယ့် လေ့ကျ...
Myanmar CNN ကို ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနည်း
အောင်မင်္ဂလာတွင် လူခေါ်ပွဲစားများကြောင့် ခရီးသည်များ ...
ဂျကာတာလမ်းပေါ်မှ မျောက်ပွဲကို ပိတ်ပင်တားမြစ်
ရောမမြို့တော်သူ ဆု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လက်ခံရယူ
နယ်စပ်မြို့အချို့တွင် ဂိမ်းဆိုင်များ ဆက်တိုက်ဖမ်းဆီး
ဂန့်ဂေါမြို့နယ်ကရှားရှာပါးပါးအမျိုးသမီး ရပ်/ကျေး အ...
ရခိုင် ဒုက္ခသည်စခန်းတွေ စားနပ်ရိက္ခာ ပြတ်လပ်တော့မည်
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့မှ ၀င်ရောက်လာသူ ဒါဇင်နှင့်ချီပြီး ရသေ့ေ...
၂၀၁၅-၂၀၁၆တွင် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှု ၈၀ရာခိုင်နှုန်းအ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးနှင့် တွေ့ဆုံ
အစိုးရနှင့် KIO တို့ တိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေ ...
မန္တလေးတိုင်း ခြောက်မြို့နယ်တွင် အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရ...
အခြားနိုင်ငံများမှ ငါးခိုးရေယာဉ်များကို စစ်ဆေးအရေး...
ရမ်းကားခွင့်လိုင်စင် ဘယ်သူတွေ တီထွင်ထားသလဲ
LG ရဲ့ ကွေးကောက်စမတ်ဖုန်း G Flex တရားဝင် မိတ်ဆက်
ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ရောင်းဝယ်ရေး နည်းဥပဒေ ရက် ၉၀...
နိုင်ငံခြားဘာသာ တက္ကသိုလ်များ သင်ရိုးညွှန်းတမ်း စတင်...
နက္ခတ်ကြောင့် မြစ်ထဲရောက်နေရတဲ့ ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်း...
Flat Color Selector - Metro Design or Microsoft De...
ယာဉ်မတော်တဆမှုများကြောင့် ၂၄ ရက်အတွင်းလူ ၁၇၀ ကျော် ...
သုံးစွဲရသည်ကို မကြိုက်သည့်အတွက် Samsung စမတ်နာရီကိ...
ဂျပန်အစိုးရမှ တာဝန်ယူမည့် ပညာတော်သင်ဆု ၅ ဆု ကမ်းလှမ်း
ဂျပန်ဒီဇိုင်နာ၏ အမြင်ဆန်းသော ဒီဇိုင်းများဖြင့် Adi...
ရဲနှစ်ဦး မောင်းနှင်သည့် ဆိုင်ကယ်နှင့် အရပ်သားဆိုင်...
ဗိုလ်တထောင်ဆိပ်ကမ်း ရေပေါ်ဟိုတယ် ဧရိယာ၌ ပထမဆုံး ရေေ...
ပဲခူး၊ ဟင်္သာကုန်းက ပဒေသာပင်ပွဲအား မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်ဆ...
ဓားဖြင့်ခုတ်သည်ဆိုသည့်အမှု ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကို ...
မင်္ဂလာတောင်ညွန့် စီးပွားရေး အဆောက်အအုံများ စီမံကိန်...
မန္တလေးတွင် ပြုလုပ်မည့် ဆီးဂိမ်းစ်တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်...
ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီးရှိ မြေဧက ၈၀ ခန့်ပေါ်တွင် Nissan...
နိုင်ငံခြားသား အမည်ပေါက် မြေကွက်များတွင် ဆောက်လုပ်...
ရသင့်ရထိုက်သည့် အခွန်အခများကို ဖိဖိစီးစီး ကောက်ခံမ...
၁၅၀၀ တန် မိုဘိုင်းဆင်းကတ်များ အပါအ၀င် မိုဘိုင်းဆင်...
မြို့နယ်အတွင်း တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု ရရှိနေသဖြင့် မြေ...
ပြည်တွင်းစစ်မီး အပြီးသတ်ငြှိမ်း နိုင်ရေးအတွက် ဖွဲ့...
ကရင်အမျိုးသား စည်းလုံးရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်...
နှစ်ထပ်တည်ဆောက်လျက်ရှိသည့် ဘုရင့်နောင် ခုံးကျော်တံ...
အမေရိကန်က မာကယ်လ်၏ဖုန်းကို ၂၀၀၂ခုနှစ် ကတည်းက ထောက်...
Hepatitis C Treatment and Management အသဲရောင် (စီ)...
တရုတ် စီမံကိန်းကြောင့် ရခိုင် ပြည်နယ်မှာ နစ်နာတာတေ...
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် တည်ထော...
Universities Champions Leagueဆုဖလား ဆေးတက္ကသိုလ်(၂)...
Miss Universe ၂၀၁၃ တို့ရဲ့ အလှပဆုံး swimming suit ...
မီးဖိုခန်းမှ အိမ်ရှင်မတို့၏ အကြောက်တရား
၂ဝ၁၅ ကိစ္စ ဦးသိန်းစိန် ကိုယ်တိုင်ပြောမယ်